You are here: Home somal Kulankii Ciyaareed ee Kooxda Axmed Dhagax iyo Kooxda Masalaha
Qaybtii hore ee ciyarta waxaa laba (2) goo loo darandoori ah dhashaday Kooxda Maslaha taasi oo a ay qaybtii hore ee ciyaartu ku soo gabogabowday 2 iyo 0. Halka kooxda Axmed Dhagax aysan waxba la iman.
Hlafkii danbe ayaa la isku soo laabtay iyada oo koox waliba la soo tashatay Tababarahoodii koox walibana ugu talo galeen in ay halkaas guusha kala hoydaan.
Cabaar markii ay ciyaatu socotay ayaa waxa kooxda Axmed Dhagax ay la timid goolkoodii ugu horeeyay, jawigii ciyaarta ayaa is badalay waxaanu isku badalay mid aad u kulul dhanka ciyaarta. Kooxda Masalaha uma ay suurto galin in ay goolal kale keensadaan balse Werarkoodu muu kala go’in lbada kooxoodba.
Kooxda Axmed Dhagax ayaa fursad kale u heshay in ay la timaado goolkoodii labaad waxayna ciyaartii noqotay 2 iyo 2, Ciyaartiina waxay ku soo gabo gabowday 2 iyo 2,